In Photos: Silent Tokyo - The Mainichi
The Ginza shopping district in Tokyo's Chuo Ward is seen nearly deserted on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Toshiki Miyama)
Fewer people and cars than usual are seen in the Ginza shopping district in Tokyo's Chuo Ward on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Toshiki Miyama)
In this photo taken from a Mainichi Shimbun helicopter, a major intersection in the Ginza shopping district in Tokyo's Chuo Ward is seen almost deserted on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Yuki Miyatake)
In this photo taken from a Mainichi Shimbun helicopter, fewer pedestrians than usual are seen crossing the "scramble" intersection in Tokyo's Shibuya Ward on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Yuki Miyatake)
Far fewer pedestrians than usual cross the "scramble" intersection in front of JR Shibuya Station in Tokyo's Shibuya Ward on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Kimi Takeuchi)
Far fewer people than usual are seen in front of JR Shibuya Station in Tokyo's Shibuya Ward on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Kimi Takeuchi)
People are seen walking on Takeshita Street in the Harajuku district of Tokyo's Shibuya Ward on March 28, 2020, despite a metropolitan government call for residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Kimi Takeuchi)
Many people are seen walking on Takeshita Street in the Harajuku district of Tokyo's Shibuya Ward on March 28, 2020, despite a metropolitan government call for residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Kimi Takeuchi)
An avenue in front of the JR Tokyo Station is seen almost deserted on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Toshiki Miyama)
Only a few people are seen at an entrance to JR Tokyo Station on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Naotsune Umemura)
Fewer tourists than usual are seen at the Kaminarimon Gate in the Asakusa district of Tokyo's Taito Ward on March 28, 2020, after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Naoaki Hasegawa)
Nakamise shopping street in the Asakusa district of Tokyo's Taito Ward is seen almost deserted on March 28, 2020, as many shops are closed after the metropolitan government called on residents to refrain from going outside over the weekend due to the spread of the new coronavirus. (Mainichi/Naoaki Hasegawa)